डिसेम्बर महिनाको रमाइलो पक्ष छ, त्यो भनेको यो एकदमै रोमाञ्चक महिना हो । अंग्रेजी महिना डिसेम्बरमा आधा मंसिर र आधा पुष पर्दछ । यसर्थ, यो महिनामा जाडो निरन्तर बढिरहेको हुन्छ, विकसित राष्ट्रतिर यो महिनामा धेरै चाडपर्वहरु पर्दछन् र मानिसहरु स्वभाविकरुपमा उत्साहित र रमाइलो मुडमा हुन्छन् । मानिसहरुलाई लागिरहेको हुन्छ कि हावामै प्रेम तैरिरहेको छ । यसलगायत अन्य विभिन्न कारणहरु छन्, जसले गर्दा डिसेम्बर सम्भोगका लागि खास महिना हो-
नेपालको लागि मंसिर अन्तिम र आधा पुष उत्सवको महिना होइन । तर, वैश्विक परिदृश्यमा हेर्दा यो समयमा अत्यधिक पर्वहरु पर्दछन् । क्रिसमसपछि नयाँ वर्ष । पर्याप्त बिदा र रमाउने वर्ष । यसर्थ, जोडीमा घुम्ने र रमाउनकाे लागि खास वातावरण पैदा हुन्छ, जसले सम्भोगको लागि सजिलो बनाउँछ ।
डिसेम्बर वर्षको अन्तिम महिना हो अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार । यो भनेको पुरानो वर्षलाई बिदाई गर्दै नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने समय । यसर्थ, एउटा वर्षकै बिदाइ गरिँदैछ भने त्यस्तो सम्झनलागक समय किन नबिताउने ?
डिसेम्बरको अन्तिमतिर प्रायः मानिसहरु भ्रमणमा निस्कछन् । अब कल्पना गर्नुहोस्, अफिसको कामबाट मुक्त बिदाको समय, चिसो मौसम र कुनै सुन्दर स्थानमा तपाईको साथीसँगै छ । त्यो पल तपाईंले कसरी बिताउनुहोला ? न कहीँ जाने तनाव, न कामको तनाव । सुन्दर ठाउँमा सुन्दर जोडी । अनि के होला त्यहाँ ?